Isku-xirka Twitter və ari suuq-geyn oo hoos loo dhigo ganacsi kasta oo kasta waa inuu ahaadaa. Waxaa la caddeeyey in ay tahay istaraatiijiyad muhiim u ah in la dhiso kalsoonida, kor u qaadida wacyiga marka, la xoojiyo xidhiidhka dadka dhagaystayaasha ah.
Haddii aad la yaaban tahay sida aad u bilaabi laheyd kadkaaga Twitter, halkan ya halkan waa qaar ka orta ah hage weyn oo la raaco.
WHSR waxay bilowday adeegeena iştag ee ‘WHSRnetChat’, waxaanay gaarsiisaa kuwa bloggerlər, saameyeyaasha, şaxsiyaadka, sumcada, ururada, iwm. Bir ay ururiyaan ra’yigooda ya jawaabcelinta mawduucyada la xiriira blogga.
Waxaan bilaway ololahan doğulan Twitter-dən və ya ujeedka ilə – bir aydan bəri bəhs edən bloglar ilə tanış olmaq.
Tvitterdən xəbərdar olun.
3 #WHSRnetChat Q3. Wa maxay qaabka ugu wanagsan ee looga bixi karo bloggaaga?
2016 waxay sii wadaa inay noqoto sanad adag oo loogu talagalay warshadaha blogging. Google ilə əlaqə yaratmaq üçün Google ilə əlaqə qurmaq, bloggerlər ilə əlaqələndirmək üçün, bloggerlər ayaq-la filayaa ay şaqo ad və ku ayaqlarını bağlamaq.
Orta ka orta qaybta muhiimka ah waa baahida loo qabo in lagu daro heer sax ah oo awoodeed oo ku saabsan mawduuca.
Barta blogku waa in ay diirada saaraan bixinta maadooyin wanaagsan oo wax ku ool ah oo akhristayaasha. Ereyada kale, bloggerlər ayaa laga yaabaa inay u baahdaan inay eynieyaan cilmi baaris iyo qara dheer oo ismarışları.
Halkan waxaa ka orta ah jawaabaha qaar ka Mid ah WHSR ayaa heshay su’aasha kuir Twitter-a ugu horeysay ee Twitter-ka Twitter-ka.
waxay soo saaraan sheeko wanaagsan oo ku lug leh akhristayaasha. Sidoo kale eynie qorshe aadna u shaqeyso si adag.
gaabis ah oo joogto ah. Anigu waxaan ahay 10 sənayedə diiradda saaraya kobaca pivə
– Fugogaraam iyo Muuqaal (@fuggsandfoach) 7 Fevral 2016
Dhowr ka orta ah kaqaybgalayaasheena Twitter-a aaa soo jeediyay isweydaarsi ya shaqooyin ada oo ah fureka aasaasiga ah ee lagu kordhinayo blog.
Waxaan u maleynayaa in joogtayntu marwalba muhiim tahay. Anshax ahaan, diiradda, boostada & warbaahinta bulshada. #bloggingtips # sheyagaaga #WHSRnetChat
Ku sii wad! Noqo orta yologta ah oo aan ka baqin inaad la wadaagto qof walba!
Haysashada codka gaarka ah marka codka la midka yahay sida qaraallada wanaagsan.
Ton wuxuu ka soo baxayaa bogagga wuxuuna kugu xirayaa akhristayaasha. Markaad u dhowdahay inaad dhagaystayaashaada ku dhageysato, waxa fiican inaad fahamsan tahay waxa ay raadinayaan iyo waa hab lagu fili karo si aad u korto blogkaaga, sidoo kale!
Sidookale, ahaada Ha isku dayin inaad qof kale ku daydo. Adeegso codkaaga ya oe eyni qaabkaaga.
Dhawaan, Jerry @WebHostingJerry, aylar qoruyub saxlaya bilmək üçün blog proqramı ilə məşğul olmaq. Iska hubi kuwan 5 xeeladaha blog blogu wuxuu ku qeexayaa 2016.
Firfircoon şabakadaha bulshada si aad mumi uga qaba dhagaystayaashaada
Ku shaqo adag oo sii wad
Bir Blogger-də Waa la leadaahay habdhaqan maalinle ah oo jilicsan.
Waa inaad akhrido maqaalada, sameyso cilmi baaris qotodheer, qorsheyso joornaalkaaga blogka, kobcinta bartaada, iwm. Jadwalkaaga waa la buuxiyaa! Sidaa darted, waxaad u baahan tahay qalab kaa caiaiya inaad muma qaba, gay ahaan si aad u maamusho warbaahinta bulshada.
Maareynta jiritaanka bulshada waa orta ka orta qeybaha muhiimka ah ee aadan awoodin inaad lumiso. Sidoo kale waa maareynta jiritaanka bulshada ay lumineyso waqtigaaga ya tamartaada bada. Waxaan su’aal uga jawaabnay su’aal qorayaasha ya suuqgeeyayaasha waxaanan halkan u soo jeedinay jawaabo la iftiimiyay.
– Waxaad Ilmahayga Hooyo (@YouBabyMeMummy) 23 May 2016
Heyif! Buferin Xaqiiqdii waa furfurnaan, Tweet Jukebox + Dabiiciga bulshada ??? [@buffer @SproutSocial @alphabetsuccess] #WHSRnetChat ???
– Sam Hurley ????????? (@Sam___Hurley) 30 May 2016
Tampon və ya HootSuite ilə əlaqə qurmaq istərdim.
– Ileane Smith (@Ileane) 24 May 2016
Waxaan istəkləri ilə Hootsuite və Oomph Sosial
– Ku-xirida Mummey (@AttachmentMumma) 19 May 2016
Baba badan ayaa jira, Bufer, Hootsuite iwm 🙂
Waxaan ku soo aragnay waxyaabo aan rasmi ahayn oo ku saabsan su’aashan. U qaado tixraac haddii aadan weli gaaan ka gaarin qalabka maareynta warbaahinta bulshada ee xulashada.
Sida aad arki kart, intiqam baqa qaybgaleyaasheena waxay kugula talinayaan bufer, Hootsuite ya Socialoomph inay yihiin qalab ay u adeegsadaan maareynta warbaahinta bulshada.
Hootsuite və ya Bufer buxarı yihiin labada qalır və müharibə ilə əlaqəli bulşada ee ugu caansan bulshada dhexdeeda. Waxaad arki karta inta hartay.
Waxaad xisaabin karta dhammaan xisaabaadkaaga warbaahinta bulshada hal meel isla markaana jadwalkaaga ku qor. Hootsuite ha ka shaqeeyaan goorta ay soo diraan. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad kaydiso mashaakilaadka waxtar leh si dib loogu isticmaalo dambe.
Baqiintu waxay kuu ogolaaneysaa RSS darto in aad u hesho boggaga bulshada oo aad si toos ah ugula wadaagto boggaaga. Waxa kale oo aad wanaajin karta taariikhdaada la soo dhajiyay oo leh waqti-gaaban si loo abuuro jadwal dib-loo-qaabeyn ah.
Twitter-də qeyd oluna bilər. Waxaad abuuri kartaa kaydka safka loogu talagalay tweet-kaaga. Waxay kaa caawineysaa in aad jadwalato fariin qaraal ah oo kala duwan mar kasta oo la soo diro.
Qeybta xiisaha lihi aniga ilah tahay waxaa jira qalab fara badan oo mudan in la xuso. Waxay u badan tahay inaadan haysan waqti ku filan oo aad ku baadho dhammaantood.
Təqdim olunanlar Twitter-dən istifadə etmək üçün Twitter-də istifadə edilə bilər..
hiya, Waxaan və isticmaalaa Sosial Oomph və Tweetdecaki Facebook-a müraciət edin..
– Vicky Charles (@SingleMAhoy) 7 May 2016
Waxaan jeclahay Bufer, JustRetweet və İdarəetmə. (Kaliya waxaan isticmaalaa agabyada maamulka ee Twitter) 🙂 #WHSRnetchat #warbaahinta bulshada
– Jasper (@OpportunityTM) 28 May 2016
@ Crowdfire ma fiicna inaad kormeerto soo socda?
– Stephanie Buckley (@eatleepchic_ie) 25 May 2016
Şabakad İnternetdə və ya Awood’ta İnternetdə. Laga soo bilaabo veb-saytı, waxaad arki karta cidda ku hawlaneyd koontadaada. Waxa kale oo ay kaa caawineysaa inaad hesho dadka isticmaala munaasabadaha soo socda.
Waa qalab aad u maareyn kartı Twitter-də bir qayda olaraq qaya qayqqalka və ya abuurista raadoyinka imaan kara. Waxaad la socon kartaa dhammaan isdhexgalkaaga muhiimka ah ee beeshaada gudaheeda. Waxa ugu fiicani waa, waxaad sameyn karta oo kobcin kartaa ololeyaal qala duwan sida jadwalkaaga gaarka ah.
La isticmaalo-da sahlan tahay. Kaliya cusbooneysii cusbooneysiintaada məktəbada oo eynie jadwalka boostada. Edger wuxuu isticmaali doonaa cusbooneysiinta maktabada si uu u abuuro saf. Qaybta ugu fiican waa, waxay "avtomatik olaraq" u buuxin doontaa oo buuxin doontaa lafteeda ya cusbooneysiinnadaada ma aha inay qashinayaan.
Ciyaaraha warbaahinta bulshada ayaa isbedelaya ya blog-gaagu u baahan yahay hal ama in ka badan. Isku habee ama u dhinto.
Iyada oo kuirir tahay niş, waxaad u maleyn karta in shabakadaha aan caadi ahayn in ay gaaraan dhagaystayaashaada.
İstiqlal aaladaha si caqligal ah oo waqti u wakhti si aad u eegto dadka raacsan iyo jaangooyooyinka.
Maqaalka la xiriira: Falanqaynta müharibəsi ilə müqayisə
Uwo guurista su’aasha ugu dambaysa ee ku saabsan Xudbadaaga Twitter
#WHSRnetChat Q3. Wa maxay qaabka ugu wanagsan ee looga bixi karo bloggaaga?
Hagashada lagagta laga helo blogga internetde cox ceer waa mawduucda ugu qatarsan. Marka aad eegto isbedelka Google, və orta ka ortası ereyada ugu caansan ee waqtiga oo dhan.
Bishii Janaayo 2016, Pat Flynn oo ka socota Dakhliga Dakhliga Gaarka ah $ 106,492.27. Waxa uu samaynayaa (ku dhawaad) sida ugu yar ee shirkadda yar ee shirkadda liiska.
Sida laga soo xigtay qaar ka mid ah ka qaybgalayaasheena, habka ugu wanaagsan ee looga helo lacagta blogga ve iibinta shirkadda.
Si: # 1 Guryaha Shirkadda tooska ah, # 2 Heshiisyada Heshiiska La Wadaago # 3 Amazon filialı, # 4 Adsense / Media.net.
– Brian Jackson (@brianleejackson) 13 aprel 2016-cı il
Adeegsiga baloog si aad u bixiso xalka akhristayaashaada ayaa sidoo kale ah hab caan ah oo lacag lagu eynieyo. Waa tan sida aad u sameyn karto
Qaar ka orta ah ayaa laga yaabaa inay isticmaalaan boodhka sidii qalab mum soo saarka si kor loogu qaado iibinta alaabada ama adeegyada.
Isticmaal bartada sida qalab suuq ah oo soo jiidanaya si aad u soo jiidatid runta, bixiya macaamiisha adeegyada caadiga ah, ee soo noqnoqda.
– Brent Jones (@brentjonline) 13 aprel 2016-cı il
Gael Breton ya oa ka socda Hay’adda Hacker ayaa falanqeeyay sida blogger ay lacag uga helaan barta iyo waxay la yimaadeen qaybaha waaweyn ee 3 halkaasoo lakagta ay ka timaaddo (oo muuqata orta u muuqata orta sahlan).
Mənbə: Maamulka Hacker
Baba badan ya da bloggerlər ilə eyni internetdə. Waa la qaban qara.
Waxaad mar walba ku bilaabi karta orta ka orta ah saddexda qaybood ee kor ku xusan.
Qaado tallaabo oo mum ka baro farsamada wadada.
Maqaalka la xiriira: Sida loo eynieyo (lacago badan) lacag blog ah: fikirado nic, daraasad kiis, istaraatiajiyada taraafikada
Waxaa lagugu soo dhaweynayaa inaad na siiso fikadahaaga ku saabsan su’aasha ku xigta ee bogga Twitter-ka. Nagala soo xiriir #WHSRnetChat si aad ula wadaagto khibradaada ama waydiiso su’aalahaaga.
@sherisaid, @rozkwalker, @michelotta, @ 30ishblogging, @cucumbertown, @ cre8d, @ mousefashion95, @KintsugiOfLife, @aannadobreva, @SalmaDinani, @kevvieguy, @ DeepaliBhatt4, @theresamrone, , @ thejfoster42, @HoylesFitness, @ ImRose1, @ElleAyEsse, @MikeSMcDonald, @WebpresenceUK, @INNOVEXco, @B_Grimaldi, @shyvish, @mzoptimism, @UwanaWhat, @ikechiawazie, @enfe @, @Minecha bloghandsseo